नेपाल आज | जागिरबाट राजिनामा गरेर बझाङ गएकी पवित्रालाई प्रधानाध्यापकले किन काठमाडौ बोलाए?
जागिरबाट राजिनामा गरेर बझाङ गएकी पवित्रालाई प्रधानाध्यापकले किन काठमाडौ बोलाए?
बुधबार, ३० असार २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौमा अझै स्मार्ट लकडाउन कायम नै छ । शैक्षिक संस्था पुर्ण रुपमा बन्दछन् । गाउँ मै परिवारसँग मेलापात गरेर बसेकी पवित्रालाई विद्यालयका प्रधानाध्यापकले नै फोन गरेर बोलाएको आफन्तको भनाई छ ।
बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका ०५ की २३ वर्षिया पवित्रा गुर्धामी काठमाडौमा मृत फेला परेकीछन् । सोमबार काठमाडौ महानगरपालिका ०७ भत्केकोपुल स्थित हेरिटेज बोर्डिङको एउटा कोठामा उनि मृत फेला परेकी हुन् ।
विद्यालय स्रोतका अनुसार पवित्राले सोमबार करिब ३ बजे झुण्डिएर आत्महत्या गरेको जनाईएको छ । दिउँसो करिब ३ बजे पवित्राले झुण्डिएर आत्महत्या गरेको अवस्थामा आफुले भेटेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेस लिम्बु बताउँछन् । उनका अनुसार पवित्राले आफुबस्ने कोठाभित्र चुकुल लगाएर आत्महत्या गरेकीहुन् ।
पवित्रा विगत २ वर्षदेखि हेरिटेज स्कुलमा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत थिईन । जब सेन्टरले काम मिलाई दिएपछि उनि स्कुलको होस्टेलमा खाना पकाउने काम गर्थिन । अघिल्लो निषेधाज्ञाभरी काठमाडौ मै बसेकी पवित्रा यसपाली भने जेठ १५ तिर गृह जिल्ला बझाङ फर्किइन । उनि विद्यालयबाट राजिनामा गरेर नै बझाङ फर्किएकी थिइन । काठमाडौमा अझै स्मार्ट लकडाउन कायम नै छ । शैक्षिक संस्था पुर्ण रुपमा बन्दछन् । गाउँ मै परिवारसँग मेलापात गरेर बसेकी पवित्रालाई विद्यालयका प्रधानाध्यापकले नै फोन गरेर बोलाएको आफन्तको भनाई छ । शैक्षिक संस्था पुर्ण रुपमा बन्द भएको बेला विद्यालयमा काम गर्ने पुर्व कर्मचारीलाई किन काठमाडौ बोलाईयो? पवित्रा काठमाडौ आउँदा प्रधानाध्यापक राजेश लिम्बुले नै खर्च समेत पठाएका थिए ।
पवित्रा काठमाडौ पुगेको एकहप्ता नवित्दै उनले आत्महत्या गरेको प्रधानाध्यापक बताउँछन् । तर पवित्राका आफन्त भने आत्महत्या गरेको मान्न तयार छैनन् । उनिहरु भन्छन्, ‘पवित्राले आत्महत्या गर्ने जस्तो परिस्थिति केही थिएन । उनि मानसिक रुपमा स्वस्थ र निडर थिइन् । सानोतिनो समस्याले निराश हुने स्वभावकी थिइनन् ।’
यता प्रधानाध्यापक राजेश लिम्बु भने पवित्राले आत्महत्या नै गरेको बताउँछन् । उनि भन्छन्, ‘विद्यालयमा होस्टेल सञ्चालन गर्ने तयारीमा थियौँ । कक्षा १० का विद्यार्थीलाई होस्टेल मै राखेर पढाउने तयारी भएकाले हामीले पवित्रालाई फोन गरेर बोलाएका हौँ । यता आउने वित्तिकै यस्तो गर्छिन भन्ने के थाहा थियो र । सायद हाम्रो दुःख पाउने भाग्य रहेछ ।’
यस्तो प्रधानाध्यापक सरोज लिम्बुको प्रतिक्रिया
पवित्राका आफन्तहरुले घटना आत्महत्या नभएर हत्या भएको दाबी गरिरहेकाछन् । अहिले पवित्राको शब पोस्टमार्टमको लागि त्रिबी शिक्षण अस्पतालमा राखिएको छ । पवित्राको शब घटनास्थलबाट उठाउनुभन्दा पहिले आफुहरुलाई कुनै जानकारी नै नगराई पोस्टमार्टमको लागि लगिएको आफन्तहरु बताउँछन् । पवित्राका आफन्त प्रताप गुर्धामी भन्छन्, ‘पवित्राको शब उठाउनुभन्दा पहिले हामीलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो । मलाई पनि शबको मुचुल्का उठाईसकेपछि जानकारी आयो । घटना शंकास्पद छ । हामीलाई जानकारी नै नगराई कसरी मुचुल्का उठाईयो? प्रहरीले त्यसरी मुचुल्का उठाउन मिल्दैन । प्रहरी र विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सुनियोजित तरिकाले घटनालाई दबाउन खोजेकाछन् ।’